WAAYIHII WARSAME Q29AAD W/Q: Cali M Diini | Laashin iyo Hal-abuur
WAAYIHII WARSAME Q29AAD W/Q: Cali M Diini
WAAYIHII WARSAME Q29AAD
Toddobada bilood markii uu Warsame joogay Shiikh Shacayb iyo taliye Abuu Haniya na maalin walba ku amrayaan uu dalkii dib ugu noqdo ayuu Warsame go’aansaday in uu Soomaaliya ku laabto. Idil iyo maamo Caasho waxa uu u sheegay in uu Muqdisho u socdaalayo si uu soo xalliyo hawlo qabyo ka ahaa bil gudeheedna uu soo noqon doono. Maamo Caasho inta ay shan boqol oo doolar siisay iyo toddoba boqol oo uu mushaar ahaan ugu lahaa ayay ku tiri “eeddo safar salaama nabad ku soo noqo”.
Warsame baabuur ayuu Nairobi uga baxay labo maalmood kadib Kismaayo ayuu soo galay. Isla markiiba waxaa la geeyay xero lagu tababaro saraakiisha kooxaha muqaawada gaar ciidankooda si gaarka ah u tababaran ee hawlgallada culus fuliya.
Muddo afar bilood ayaa waxaa barayay sida loo qorsheeyo loona fuliyo hawgalka ku dhufo oo ka dhaqaaqda ah iyo beegsiga shakhsiyaadka sare dawladda soomaalida. Markii uu tababarkii soo dhammaystay Warsame waxaa madax looga dhigay unug si aad ah u hubaysan oo oo jidgooyin u gala ciidanka xabashida iyo kuwa dawladda soomaalida ee gobollada Jubbooyinka. Ugu dambayn waxa ay ku guulaysteen in ay ciidankii xabashida ka saaraan dhammaan gobollada Jubbooyinka. Warsame waxa uu noqday nin ay geesinnimadiisa iyo aqoontiisa dagaalka ay ku majeertaan kooxaha muqaamadu waxa uu na ku guulaystay dallacaado badan iyo billado.
Markii ciidanka Xabashidu Jubbooyinka ka huleeleen Warsame waxaa loo beddalay Muqdisho halkaas oo uu ka socday dagaal ka adag kii Jubbooyinka. Warsame waxa uu hoggaamiyay hawlgallo badan oo ciidanka Xabashida dhaawac culus lagu gaarsiiyay intii uu Muqdisho joogay.
Markii ciidankii Xabashidu Muqdisho ka bexeen ciidankii Warsame ka midka ahaa waxa noqdeen kuwa sii wada dagaalkii ay dawladdii cusbayd ee soomaalida kaga soo horjeedeen oo Shabaaab ayay u xuubsiibteen. Warsame kuma qanacsanayn in dagaalka la sii wado oo waxa uu arkayay in aysan jirin sabab dagaalka loo sii wado marba haddii ciidankii cadowga dalka laga saaray. Balse labo sababood dartood Warsame waa ku adkayd in uu Shabaab isaga tago, tan koowaad nabadgalyadiisa oo haddii uu ka Shabaab ka baxo waxa uu hubay in la dili doono xattaa haddiii uu go’aansado in uu ka baxana taasi qudheedu ma sahlayn. Tan labaad waxa ahayd dhanka lacagta oo Shabaabku mushaar badan oo aan dalka laga qaadan ayay Warsame siin jireen.
Muddo ku dhawaad labo sano ah ayuu Warsame Kenya ka soo maqayn yahay jacaylkiisi Idil na mar hore ayay Jaamacaddii dhamaysay. Inkasta oo ay Warsame ku adkayd in uu Idil taleefan iyo internet kula xiriiro cabsi uu ka qabay sirdoonka kooxdiisa Shabaab haddana marmar ayuu la xiriiri jiray kuna sasabi jiray in uu bisha dambe soo baxayo.
Shabaabku si daran ayay ku ilaalin jireen xiriirka saraakiishoodu la samaynayso dadka kale gaar ahaan dalalka dibadda ninkii lagu qabtana waxaa logu eedayn jiray in uu basaas yahay waana la dili jiray.
Intii uu Muqdisho joogay kooxdu waxa ay magaalada ka gaysteen falal naxdin leh sida dilal madax jabin ah, qaraxyo iyo kuwa kale oo argagax leh. Warsame aad ayuu necbaa waxa kooxdiisu samaynayso hase ahaatee waxba ka ma uusan qaban karin wax ka qabad iska dhaafe su’aal kama uusan soo celin karin. Falalka qaarkood Warsame asaga ayaaba qayb ka ahaa oo wax ka fulin jiray. Maadaama uu madax ka ahaa unug ka mid ah ciidanka kooxda waxaa dhici jirtay in sirdoonka kooxdu qof shacab ah ama mid dawladda u shaqeeya ay soo eedeeyaan kadib na madaxda sare ayaa Warsame ku amri jiray in uu qofkaas shaqo ka soo qabto kadib na Warsame rag unuggiisa ka mid aha ayuu u diri jiray oo soo dili jiray.
Falkii ugu darnaa waxa uu ahaa, gabar dhallinyaro ah ayaa lagu armay in uu shaqo ka soo qabto, gabadhu waxa ay u shaqaynaysa wasaarad dawladda ka mid ah waxaana kooxdu ku eedaysay in ay diinta ka baxday ayna u shaqayso dawladda riddada. Galab casirkii ayaa Warsame iyo labo wiil oo unuggiisa ka mid ah istaageen jidkii gabadhu mari jirtay marka ay shaqada ka soo baxdo oo ay gurigeeda u socoto. Markii gabadhii jidka soo martay ayaa Warsame iyo saaxiibbadiis dabagaleen. Markii ay in muddo ah dabasocdeen si u toogtaan marka ay gaarto meel ku habboon oo dadku ku yar yahay si sahlanna ay ugu baxsan karaan. Markii ay ahayd in Warsame amarka toogashada bixiyo ayuu mar qura saaxiibbadiis ku jeestay kuna yiri “gabadhu waxa ay u egtahay qof aan aqaanno ee bal suga aan hubiyee.” Inta uu ka dabatagay gabadhii ayuu la hadlay oo waydiiyay sababta ay dawladda riddada ugu shaqayso. Gabadhii waxa ay ugu jawaabtay “walaal waxaan ugu waynahay 10 carruur ah, hooyadey waa baralays aan musqusha aadi karin in la geeyo maahane sidoo kale lugta midig way go’an tahay, waxaa sidaas hooyadey u galay madfac ciidankii Xabashidu soo rideen oo gurigeenna ku habsaday, aabbahayna madfacaas ayaa dilay. Sidaas darteed ayaan ahay qofka kaliya ee qoyskaas biila ma na aqaan meel kale oo aan biil uga keeno haddaan shaqada dawladda iska dhaafo.” Warsame si daran ayaa hadalkii gabadhu u taabtay naxdin ayuuna la gariiray. Waxa uu u sheegay dilka loo qorsheeyay iyo uu galabta ugu yimid in uu dilo.
Ugu dambayn waxa uu gabadhii kula taliyay in xaafadda ka guurto ayna degto xaafadaha dawladdu maamusho sidoo kalena aysan lugayn marka ay shaqada u socoto ama ka socoto waayo haddaan anigu galabta ku dhaafay nimankaasi ku ma dhaafayaan.
Warsame markii uu saaxiibbadiis ku noqday waxa uu u sheegay in uu digniin siiyay ayna ballanqaadday in aysan dawladdaas mar dambe u shaqayn.
Warsame galabtii uu gabadhaas la kulmay wixii ka dambeeyay waxaa uu daris la noqday qoomamo iyo shallaay, waxa uu dib ugu noqday dilalkii badnaa ee uu fulintooda qaybta ka ahaa, waxaa u caddaatay in dadka uu dili jiray ahaayeen dad soomaaliyeed oo aan waxba galabsan sida gabadhaas. Waxa uu soo xasuustay tobanaan ruux oo kooxdiisu aakhiro u dirtay kuwaa oo isugu jiray dhallinyaro gabdho iyo wiilal ah, odayaal iyo wadaaddo masaajid hortiis lagu toogtay iyo askar duruufaysan oo laamiyada dhexdooda qudha looga jaray. Waxaa Warsame u caddaatay in uu ka mid yahay koox haloosin weecsan ku joogto oo ummadoodi halaagaya. Waxa uu go’aansaday in uusan ka sii mid ahaan kooxdaas balse maadaama ay adag tahay in uu ka baxsado waxa uu guddoonsaday in uu jaaniska ku habboon eegto.
Falalka kale ee foosha xun ee kooxdu gaysan jirtay waxaa ka mid ahaa dumarka ay sida bilaa sharciga u naagaystaan. Dumarkaa qaarkood waxa ahaayeen gabdho yar yar oo reerohoodi xoog looga soo watay, dumar la qabo oo nimankoodi oo aan furin guriga la la degay ayada oo lagu eedeeyay in nimankoodi markii horeba aysan sifo xalaal ah ku qabin ama ay ka furmeen markii raggoodi jihaadka ka soo horjeesteen.
Maalin ayaa kooxdu toban dumar ah ka soo afduubteen guryohoodi kadib na habeenkii ayaa masaajid kooxdu haysatay Warsame iyo unuggiisi midba gabar lagu mehriyay. Warsame waxaa lagu mehriyay gabar da’deedu qiyaastii ahayd labaatan jir. Warsame sinnaba ugu ma qanacsanayn waxa dhacaya balse ma uusan diidi karin. Meher kadib hoggaamiyihii kooxda ayaa u hambalyeeyay una duceeyay qoysaska cusub ee la unkay kadib na nin walba asaga oo gabadhii lagu nikaaxiyay wata ayuu hoygiisi aaday.
Warsame oo ay dhinac socoto gabadhii lagu nikaaxiyay ayaa u soo dhaqaaqay dhankii gurigii halka qol ahaa ee jiingadda ahaa ee uu degganaa. Intii ay jidka socdeen Warsame iyo xaaskiisa cusub wax sheeko ahi ma dhexmarin gabadhuna hoos ayay u foorartay. Markii ay guriga soo galeen ayuu Warsame gabadhii ka codsaday in ku fariisato kursi yar oo daydka guriga yaallay kadib na inta uu jikada galay ayuu galaas cananaas ah u soo qasay kirli shaah ah na dabka saaray. Intii uu Warsame gudaha ku jiray gabadhii waxa ay eegtay albaabka jiingadda ah ee daydka guriga ku meegaaran mise qataarka un buu Warsame galiyay ee quful ma uusan saarin. Waxa ay istiri tolow ma baxsataa inta uu gudaha ku jiro? Haddana waxa ay ka cabsatay in eryado kadib na toogto. Intii ay niyaddeeda la sheekaysanaysay ayuu Warsame oo galaaskii cananaaska ahaa wadaa soo baxay, inta uu u dhiibay oo dhulka bacaadka ah fariistay ayuu waydiiyay mageceeda. Ayada oo ooyin isku celinaysa oo illintu indheheeda soo dhaafayso ayay cod tabardaran ku tiri “Faaiso.” Inta uu u soo dhawaaday ayuu ku yiri “Faaiso, anigu ninkaaga ma ahan ku ma guursan raallina ka ma ahayn wixii masaajidka ka dhacay ee bal iiga warran xaalkaaga, waan u jeedaa adigu ma dooran in aad halkaan timaaddid ee sidee wax u dhexeen?” Faaiso inta si xooggan u neefkudday oo indhaha sacabka marisay Warsame na si togan u eegtay ayay ku tiri “walaal Ilaah baan kugu dhaarshaye ma kaa daacad baa?”
“Haa waa iga daacad,” ayuu ugu jawaabay.
Faaiso oo ilmaynaysa ayaa tiri “walaal Afgooye ayaa la iga soo qafaashay, ciidan hubaysan oo afka iyo maduxu u duuban yahay ayaa habeen saddexaad cawaysinkii gurigeenna noogu soo galay aniga waa ay i soo wateen aabbe, hooyo iyo walaalahayna waxa ay ku sameeyeen ma ogi. Waxaanse u badinayaa in ay aabbahay iyo walaalkay dileen. Kadib na halkaan ayaa na la keenay.”
Warsame ayaa waydiiyay Faaiso in ay gabar tahay iyo la qabo. Waxa ay ugu jawaabtay in bil ka hor aabbeheed ku daray kuna mehriyay wiil Nairobi jooga ballantuna ahayd in ay asbuuca dambe Nairobi u dhoofto. Warsame waxa uu Faaiso u sheegay in ay isdajiso cabsida iska dhaafto haddii Eebbe idmana uu sida uu uga dhaqsaha badan reerkoodi dib ugu celin doono. Faaiso aad bay ugu faraxday hadalka Warsame waa ayna u mahadcelisay. Faaiso inta ay jikada gashay ayay casho Karisay. Warsame siriirtiisi ayuu Faaiso u goglay asna daydka ayuu darin dhigtay. Markii waagu beryay Faaiso inta ay jikada gashay ayay quraac ka soo tuurtay markii Warsame soo kacayba quraacdu diyaar ayay ahayd. Warsame habeenkii oo dhan waxa uu ka fakarayay sidii uu wax yeeli lahaa, waxaa la toosnaatay in uusan gabadha Afgooye u celin ee uu toos Kenya ugu diro waayo waxa uu ogaa haddii ay Afgooye ku noqoto in ay Shabaabku ogaan doonaan taasi ay halis ku tahay ayada iyo asagaba. Waxa kale oo uu ogaa in haddii uu Faaiso fasaxo asagana aan fadhi u ool, sdIdaas darteed waa in uu si deg deg u baxsadaa.
Markii ay labadoodu arrintii rogrogeen waxa ay go’aansadeen in aysan macquul ahayn in ay dalka gaari uga baxaan maadaama Shabaabku jidadka joogaan Warsame na yahay nin ay si fiican u garanayaan, sidoo kale aysan suurto gal ahayn in Kenya diyaarad u raacaan maadaama aysan haysan baasboorro iyo dal ku gal ay Kenya ku galaan xattaa haddii ay taas samayn lahaayeenna ay muddo qaadanayso helidda baasboorka Soomaaliya iyo dal ku galka Kenya.
Ugu dambayn waxa ay talo ku soo hooriyeen in ay Balad Xaawo diyaarad u raacaan kadib na halkaas Kenya ka galaan. Taas qudheedu ma sahlana oo Warsame haddii gegida diyaaradaha Aadan Cadde tago waxa uu khatar ugu jiraan in Sirdoonka dawladdu qabtaan. Ugu dambaynse taas ayay guddoonsadeen. Isla subixiinna inta uu Faaiso lacag u dhiibay ayuu ku yiri tigidyo inoo soo jar. Faaiso inta ay magaalada aadday ayay tigidyadii soo goysay sidoo kale meel taleefannada laga dirsado inta ay tagtay ayay hooyadeed wacday. Nasiib wanaaag hoogo waxa ay Faaiso u sheegtay in qoyskii nabad qabo kaliya ay ka murugaysnaayeen xaalladda gabadhoodi. Faaisa waxa ay hooyadeed u sheegtay in ay nabadqabto balse aysan faahfaahin intaas dheer siin karin waxa ayse u ballanqaadday in maalmaha soo socda soo wici doonto. Waxa kale oo Faaiso hooyadeed ka codsatay in warkeeda aysan Aabbe maahane qof kale u sheegin xattaa walaaleheed aysan u sheegin.
Maadaama kooxdu Warsame gabar u aroosiyeen waxa uu xaq u lahaa muddo toddobaad ahaa in uu shaqada ka maqnaado. Taasina waxa ay Warsame iyo Faaiso u sahashay in ay baxsadaan. Maalintii markii ay Faaiso tigid soo goynta ku maqnayd Warsame shanta salaadood waxa uu ku soo tukaday masaajidka kooxda. Habeenkii marka uu guriga yimidna salaaddii cisho kadib waxa uu u Faaiso diyaarisay casho iyo akhbaartii diyaaradda Balad Xaawo. Intii ay cashada cunayeen ayay u sheegtay in diyaaraddu berri foog sagaalka subaxnimo duulayso sidoo kalena ay qoyskii la hadashay ayna bedqabaan.
Salaaddii fajarka Warsame waxa uu xaadiray masaajidka oo horjoogayaasha kooxdu salaadda fajarka ku tukadaan. Markii salaadda laga baxay Warsame waxa uu horjoogayaasha ka waraystay hawlgalladii kooxdu sida ay u socdaan iyo hawlgalladii xalay iyo guusha mujaahidiintu gaareen. Horjoogayaashu waxa ay Warsame u sheegeen in hawlgalladii shalay aysan kooxdu guulo ka gaarin oo xaafado badan laga qabsaday rag badanna uga shahiideen xalayna aysan kooxdu weerarro qaadin oo is aruursi dagaal rogaalcelis ah isku diyaarinayaan. Allaah mujaahidiinta guusha adduun iyo midda aakhriba ha siiyo cadowga Islaamkana cagta hoosteeda ha galiyo sidii Reer Caadna ha u halaago, ayuu afka ka yiri Warsame balse niyaddiisi waxa uu ka lahaa jaba oo meeldaran Ilaahay idinka saar.
Salaaddii markii uu soo noqdayba Warsame waxa uu u yimid Faaiso quraacdii diyaarisay boorsooyinkiina daydka soo dhigtay. Markii ay quraacdeen inta guriga jiingadda ahaa quful wayn dhakab ku siiyeen ayay dhaqaaqeen. Warsame labo cabsiyoodba waa ay hayaan, in Shabaabku waddada ku qabtaan iyo marka uu garoonka tago ciidanka dawladdu xiraan. Inkasta oo uusan Warsame madaxda sare ee kooxda ku jirin waligiisna warbaahinta ka soo muuqan haddana waxa uu ahaa taliye unug taasna waxa ay u baylihin kartaa Sirdoonka dawladda iyo kuwa shisheeye oo ogaan kara magacyada iyo muuqaallada taliyayaasha Shabaabka oo dhan. Warsame iyo Faaiso markii ay jidka laamiga ah tageen ayay taksi qabsadeen garoonkana si dhib yar ayay gudaha ugu galeen. Ugu dambaynna diyaaradihii ayay gudaha u galeen wax yar kadib na diyaaraddii inta ay dhabbaha dayuuraha ku oradday ayay hawada gashay. Markay ay diyaaraddii hawada gashay ayuu Warsame daaqadda kursiga uu fadhiyay inta magaalada hoos u jalleecay ayuu niyadda ka yiri
“Muqdishooy muuq wacaneey
Madal la maciinsadaay
Maamuuskaad igu la haydiyo
Kuma siin xaqaagiye
Madfac waxaan kugu ganayn
Mayd jidadkaaga aan dhigay
Ii rog baalka naxariistii
Duunku kaaga marag-kacay
Iga saamax Muqdishaay
Waxaan dulmi kaa galay
Saacad wax ka yar Warsame iyo Faaiso Balad Xaawo ayay joogeen waxa ayna labo qol ka kiraysteen hoteel dhinac galbeed ee magaalada ku yaalla. Isla markiiba labadoodi qof walba waxa uu wacay dadkii uu niyadda ku hayay Faaiso hooyadeed ayay wacday waxa ayna u sheegtay in ay Balad Xaawo joogto balse waxa ay hooyo u sheegtay in ay sirteeda qariso ilaa ay Kenya ka galayso maadaama Shabaabku ogaanayaan warka haddii uu faafo oo darisku ogaadaan Balad Xaawa na aysan ka nabadqabin Shabaabka. Sidoo kale waxa ay wacday ninkeedi Yaasir oo Nairobi dukaan ku leh horayna u la socday in xaaskiisi Shabaab qafaasheen wax ayna u sheegtay in ay bedqabto laakiin u ma aysan sheegin halka ay joogto waxa ay u ballanqaadday in ay soo wici doonto berri.
Warsame waxa uu wacay Idil oo aysan bilooyin ismaqal markii ay codkiisi maqashay oohin ayay jabsatay Idil. Waxa ay ku tiri “waxaan u malaynaayay in aad dhimatay.” Warsame waxa uu Idil ka waydiiyay in ay taqaaanno qof Mandheera jooga oo xudduudka ka gudbin kara. “Haa waan aqaan nin aan macrifo nahay oo dawladda u shaqeeya ayaa jooga hadda ayaan wacaya nambarkaaga waan siinayaa ee diyaar noqo.” Warsame waxa uu u sheegay Idil in ay la socoto gabar soomaaliyeed oo Nairobi u socota. “Labadiinnaba waan la idin soo gudbinayaa,” ayay ku tiri.
Muddo aan badnayn kadib waxaa Warsame soo wacay ninkii oo u sheegay in uu soo socdo. Ninkii oo baabuur yar wata ayaa hoteelka soo hor istaagay Warsame iyo Faaiso na inta ay shandadohoodi gurteen ayay gaarigii dalaq yiraahdeen. Ciidanka Kenya ee xudduudka joogaa gaarigii maba aysan daahin inta ay eegeen inta qof ee saaran ayay birta ka wareejiyeen. Hoteelka magaalada bartankeeda ku yaal inta uu horistaajiyay ayuu ku yiri labaatan kun oo shilinka Kenya ah oo aan askarta ku laaluushay soo boodbooda. Warsame na ayada oo doolar ah ayuu u tiriyay